Ahoana ny fomba hanehoana ny fihetseham-ponao amin'ny teny - An-Tsaina
Ahoana ny fomba hanehoana ny fihetseham-ponao amin'ny teny
Te mahazo aina milaza ny fihetseham-ponao? Ity no $ 14.95 tsara indrindra laninao.
Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa.
Efa hitanao ve ny tenanao fa tsy nahita ireo teny milaza ny tena fahatsapanao?
Efa tsy azonao antoka ve ny zavatra tsapanao?
Eny, ny filàna maneho tena dia miavona amin'ny zanak'olombelona.
Sarotra ny fiainana ary mitondra traikefa mahafinaritra sy mahatsiravina. Ny zavatra niainantsika dia namolavola izao tontolo izao, ny toetrantsika, ny fomba fahitantsika zavatra, ny fomba ifandraisantsika amin'ny olona, ​​ny fitokisantsika ary ny fihetsitsika.
Ny fahaizana maneho ny fihetseham-ponao sy ny fihetseham-ponao amin'ny teny dia zava-dehibe tokoa amin'ny fampahafantarana ny tenanao.
Rehefa dinihina tokoa, dia misy olona mihoatra ny fito lavitrisa eto amin'ity planeta ity. Fomba fiheverana fito miliara isan-karazany noforonin'ny zavatra niainany sy ny fifandraisan'ireo olona ireo.
Ny fanehoana ny fihetsem-ponao amin'ny teny dia ilaina mba hananganana tetezana amin'ny olon-kafa, na vahiny izy mivadika ho namana, manamafy ny fatoram-pitiavana, na mitety an'izao tontolo izao miaraka amin'ny fianakaviana, namana na olon-tiana hafa.
Ny fahaizana milaza ny zavatra tsapanao dia zava-dehibe koa hahafantarana ny tenanao sy ny fomba ifandraisanao amin'izao tontolo izao. Mora kokoa izany fantaro ny tanjaka, ny fahalemena , na ny olana mety hitranga raha toa ka azonao atao ny milaza ny fihetseham-ponao.
Ahoana ny fomba anaovanao an'izany?
1. Mamorona tontolo iray azonao atao mieritreritra mitsikera ary manamboatra fampahalalana.
Misy tontolo iainana manokana izay mety hanananao fotoan-tsarotra amin'ny fanaovana fandinihana kalitao.
Noho izany, voalohany, mitady na mamorona toerana ho an'ny tenanao ahafahanao mipetrapetraka amin'ny eritreritrao sy manodina izay rehetra ezahanao harahina.
Ny atao hoe tontolo iainana tsara ho an'ny eritreritra dia mety midika zavatra samy hafa amin'ny olona samy hafa. Ny olona sasany dia tia fandriampahalemana sy fahanginana, ny sasany kosa aleony karazana tabataba fotsy na koa mozika.
Manampy ihany koa izany raha toa ka afaka mametraka anao amin'ny toerana mety amin'ny saina ny tontolo iainanao hahatsapana ireo fihetsem-po tadiavinao holazaina ireo.
Fetsy an-tsoratra izay mety hanampy anao hiditra amin'ny toerana ara-tsaina sahaza azy ny fametrahana headphone sy fihainoana mozika izay taratry ny karazana fihetsem-po tadiavinao hosoratana.
Raha zavatra mampalahelo izany dia henoy ny mozika mampalahelo. Raha zavatra tezitra io dia henoy ny mozika tezitra. Ny écouteur dia tsara indrindra satria hamono ireo fanelingelenana hafa mety manodidina anao izy ireo ary hanelingelina ny eritreritrao.
Ny fihainoana hira iray fantatrao tsara amin'ny loopika dia afaka manampy koa. Satria efa fantatrao ny tonon'ilay hira, azonao atao ny manaloka ny mozika ary manafaka ny sainao tsy hieritreritra ny zavatra henonao. Manome toerana bebe kokoa hiasa sy fivezivezena ny sainao mamorona.
2. Midira amin'ny fanoratana maimaim-poana miaraka amin'ny penina sy notepad.
Ny fanoratana maimaim-poana dia fampiasan'ny mpanoratra manampy mandresy ny fatokisan-tena , tsy firaharahana ary ny sakan'ny mpanoratra.
Raha ny tena izy dia hipetraka fotsiny ny mpanoratra ary hanomboka hanoratra na inona na inona sy izay rehetra tonga ao an-tsaina, mamela ny sainy handeha amin'izay tiany fa tsy manandrana mandroaka azy amin'ny làlana manokana mankany amin'ny toerana mivaingana.
Manome fotoana ny mpanoratra hanapoahana vatokala ary hampidina ny ranom-panafody nefa tsy manahy momba ny fahalavorariana ara-teknika.
Aza manahy momba ny fitsipi-pitenenana, ny firafitra, na ny fanoratana fehezanteny na eritreritra feno aza rehefa manoratra maimaim-poana.
Hovantsika kely fotsiny ity fomba ity mba hanehoana ny fihetsem-pontsika.
Aza mamela ny sainao handeha amin'izay tiany aleha, fa miezaha hitarika azy amin'ny làlana ankapobeny na inona na inona tsapanao ary soraty izay rehetra tonga aminao.
Amin'izay ianao dia manantena fa hanana pejy iray na roa momba ny fampahalalana mifandraika azonao alahatra mba hanadio izay ezahinao holazaina.
Indraindray sarotra kokoa ny mahita ny teny noho ny hafa. Aza hadino ny manome ora anao farafahakeliny adiny iray hipetrahana, hamafana ny sainao ary hiasa.
Tokony hampiasa penina sy taratasy ianao amin'ity fanazaran-tena ity. Ny fihetsika manoratra ara-batana dia miadana kokoa ary fanahy iniana kokoa noho ny fanoratana. Hanery anao hieritreritra ny fomba hamoahana ny teninao eo am-panoratanao izany amin'ny fomba tsy mitovy amin'ny fanoratana.
Journaling tokony hatao amin'ny penina sy taratasy ihany koa noho ny antony mitovy.
8 sakana amin'ny fifandraisana mahomby
Teny mahaliana 18 hanampiana ny rakibolanao ara-tsaina
Ahoana no fomba hitenenana mazava kokoa, atsaharo ny mimonomonona, ary ho re matetika
Fomba 8 Samy hafa ny fifampiresahan'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ahoana no fomba ilazana amin'ny olona tianao izy ireo nefa tsy mahasosotra
3. Ampiasao ny zavatra nosoratanao hanasongadinana izay ilainao hambara amin'ny fehezanteny tokana.
Ny asa mankany amin'ny famoahana ny fahatsapanao dia manomboka amin'ny famaritana hoe inona no loharanon'ireny fahatsapana ireny.
Te-hanakaiky ny fototry ny olana araka izay tratranao sy afaka milaza azy amin'ny endrika fehezanteny tokana ianao.
Nahoana no fehezanteny tokana?
Ny tanjona dia ny hanazava ny tena olana mba hahafahana mampita mora aminy hoe iza no kendren'ny mpihaino - na ho anao manokana aza raha tsy mikasa ny hiresaka mafy momba izany ianao.
Tokony hanana antontam-baovao mendrika manodidina ny fihetseham-po izay ezahinao hambara ianao. Jereo izay nosoratanao maimaimpoana ary ezaho fantarina ny fototry ny fihetsem-po.
Ohatra, raha manana torohevitra ianao noho ny olana ara-pifandraisana, ny milaza fotsiny fa manana olana ara-pifandraisana ianao dia tsy mazava. Mila fanitsiana bebe kokoa izany raha te hahita ny fototr'ilay olana mba hahafahana mandamina azy.
Etsy ankilany, raha afaka miasa ianao, ' Tsy dia mahatoky ny mpiara-miasa amiko aho izao , ”Avy eo manana toerana fohy ianao hanombohana mitady antony sy vahaolana amin'izany olana izany.
Raha mampifandray an'io fehezanteny io na iza na iza ilay kendrena dia mety ho hitanao fa tsy mitovy ny fahitany ny zava-nitranga na ny fahatsapana momba izay nitranga. Izany dia ahafahanao mahita marimaritra iraisana ary manomboka miasa amin'izay olana mety hitranga.
4. Fakafakao ny toe-javatra ankapobeny ary fantaro raha tokony holazaina ny zavatra tianao holazaina.
Betsaka ny olona any izay miantso mafy anao hilaza ny marina, tsy hihazona, ary alao antoka fa re ny feonao.
Amin'ny ankapobeny, tsy torohevitra mahatsiravina izany. Na izany aza, misy fampandrenesana.
Andao lazaina, ohatra, i Amy dia avy amin'ny fianakaviana tsy miasa. I Neny sy i Dada dia tsy olona lehibe, mpiray tampo misy poizina .
Tsapan'i Amy fa misy zavatra tsy mety amin'ny fianakaviany mavitrika ary fantany fa ny poizina sy ny tsy fetezan'izy ireo dia mety ho ny fiahiany sy ny fahaketrahany.
Mety hanapa-kevitra ny hanaraka fitsaboana izy mba hahavitana izany, hamantatra izany ho olana ary mety hisafidy ny hiatrika ilay olana.
Saingy, hanampy na hanisy ratsy azy ve ny famoahana ireo fanambarana ireo? Inona no tombony azony amin'izany?
Mbola ratsy kokoa aza, raha manana mpianakavy manipulative izy dia mety hampiasa ny fihetsem-pony ho fitaovam-piadiana hamelezana azy izy ireo.
Mety hanapa-kevitra izy amin'ny farany hijoro ho azy , ary a ray aman-dreny manipulative dia afaka mamadika izany handoko azy ho 'tsy mahay mankasitraka ny sorona nataontsika' ary hampiasa azy io ho toy ny fampihenana ny fiheveran'ny olona ao amin'ny fianakaviana na namana hafa.
Mitady fomba hanehoana ny tenanao sy milaza izay tokony holazainao fa tsara sy mahasalama, saingy indraindray io fahalalana io no sisa tavela ao an-dohanao na amin'ny fahatokisan'ny biraon'ny mpanolotsaina ara-pahasalamana voamarina izay tsy hampiasaina ho fitaovam-piadiana hanoherana ianao.
Tena manokana fotoana handinihana izay azonao raisina amin'ny fampisehoana ny fihetsem-ponao, satria misy olona marobe eto an-tany izay hahita izany ho fahalemena hanararaotra sy hitrandraka fotsiny.
Indraindray dia tsara kokoa ny mangina mba tsy hampiasan'ny olona poizina ny fahalemenao sy ny fahalemenao manohitra anao.
Tianay ny hieritreritra fa ho eo amin'ny toerana iheverana ny olona manodidina azy i Amy ary te-hiasa amin'ny famahana vahaolana momba ireo fahatsapana ireo raha tafiditra ao izy ireo, saingy tsy izany foana no izy.
Ny olona sasany dia ratsy toetra sy tsy mahalala fomba fotsiny ary aza miraharaha izay fiantraikan'ny fihetsik'izy ireo amin'ny hafa ary tsy mahita antony hanovana ny fomba fijeriny na ny fomba fijeriny.
Raha fintinina, amin'ny fomba rehetra, ampiasao ny fanazaran-tena ato amin'ity lahatsoratra ity hanampiana anao hamoaka ny fihetseham-ponao amin'ny teny. Anjaranao avy eo raha mizara an'io amin'ny hafa ianao ary, raha manao izany ianao, dia iza no izaranao azy.
inona no holazaina aorian'ny daty
Ny fahaizana mahatakatra sy maneho ny fihetseham-ponao dia fitaovana sarobidy amin'ny famaritana ny fomba hiatrehana azy ireo (heverinao fa manelingelina anao amin'ny lafiny sasany).
Noho izany mamorona tontolo iainana tonga lafatra handinihanao ny fihetseham-ponao, ary ampiasao ny mozika sy ny fanoratana hanamafisana ireo singa marina tianao hazava ao an-tsainao. Avy eo manapa-kevitra raha te hizara ny zavatra hitanao amin'izao tontolo izao ianao na ny fomba hanaovana izany.
Afaka manampy anao ve ity fisaintsainana ity lazao mora kokoa ny zavatra tsapanao ? Heverinay izany.
tsy ho raiki-pitia aminao
ahoana no hilazana amin'ny olona tianao be dia be
tiako amin'ny lehilahy manambady
tsy te handany fotoana miaraka amiko izy
teny nalaina malaza avy amin'ny alice in Wonderland
rehefa misy olona tsy matoky anao tsy misy antony